Iifilitha ze-Instagram: zithini, ziphi kwaye ndingazenza njani | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | | I intanethi
I-Instagram iye yenye yezona ndawo zinamandla kwezonxibelelwano kwiminyaka yakutshanje, igqitha ezinye ezinje nge-Facebook okanye i-Twitter. Ngokusekwe emfanekisweni, ayibonakaliswanga yiloo nto kuphela, kodwa ikwacoca i-Instagram, oko kukuthi, iileya zokwenza uyilo lomfanekiso owabelana nawo, okanye ukuhombisa.
Kodwa, Zithini iifilitha ze-Instagram? Zingaphi ezikhoyo? Bafumana njani? Ngaba zinokudalwa? Konke oku kunye nokunye oku siza kuthetha ngako ngokulandelayo kwibhlog.
1 Zithini iifilitha ze-Instagram
2 Iindidi zeefilitha ze-Instagram
2.1 Amacebo okucoca ulwelo
2.2 Iifilitha zamabali e-Instagram
3 Umahluko phakathi kweefilitha ze-Instagram kunye nezitayile zebali
4 Iifilitha ezintsha ze-Instagram zinokwenziwa
4.3 I-Photoshop Express
5 Uzifaka njani iifilitha ozenzayo kwi-Instagram?
Zithini iifilitha ze-Instagram
Njengoko besesitshilo ngaphambili, iifilitha ze-Instagram zinokuchazwa njenge uthotho lweengqimba ezinokuthi zibekwe phezulu kumfanekiso owufaka kwiqonga kwaye utshintshe inkangeleko yawo nokuba kukudala ifoto eyahlukileyo, ukuphucula umgangatho kunye nemibala yayo, okanye ngokulula ukuthimba ingqalelo yabasebenzisi xa ipapashwa.
Ziyasetyenziswa ngakumbi nangakumbi, kwaye nangona kukho impikiswano malunga nokusetyenziswa kwazo, ngaphezulu kwako konke kuba kumaxa amaninzi abasebenzisi "bakhohlisiwe" ngokuveza umfanekiso ongeyonyani, basaqhubeka nokunyuka kwaye kuyamangalisa ukuba ifoto ipapashwa "ngokwendalo" kwiwebhu.
Iindidi zeefilitha ze-Instagram
Ngokumalunga neendidi, kufuneka sikuxelele ukuba, nangona uninzi lucinga ukuba inye kuphela, enxulumene namabali, eneneni zimbini iintlobo.
Xa i-Instagram yazalwa okokuqala, indlela yayo yokupapasha yayifana nakwezinye iinethiwekhi, oko kukuthi, ungalayisha umfanekiso, ubeke isicatshulwa kwaye yiyo loo nto. Ngale ndlela kusekho, kwaye xa ulayisha umfanekiso kwi-Instagram, ukongeza ekuphumeni ukuze ukwazi ukuwenza ube mkhulu okanye ube mncinci, nawo ikuvumela ukuba ubeke amacebo okucoca ulwelo kuyo, eyiphi? Kulungile:
Ezi sele sizikhankanyile zezo ziza ngokungagqibekanga, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba ukuba ufikelela esiphelweni kwaye usinike ukuba silawule, uninzi lwezihluzi ziya kuvela onokuzenza kwaye oko kuyakwenza umaleko okhethekileyo kumfanekiso wakho oya kuthi tshintsha.
Iifilitha zamabali e-Instagram
Kwiminyaka embalwa kamva Amabali e-Instagram avele. Sithumela kumabali e-Instagram kwaye kuya kufuneka uyazi ukuba ezi zinokucoca ulwelo olwahluke ngokupheleleyo kunolo lwangaphambili. Uninzi lwazo lubonakala ngakumbi kwaye luyintsusa, kuba zidlala kancinci ngeziphumo ezizodwa.
Kule meko, ezi unokuzifumana zezi zilandelayo:
Unyaka ka-de Ox.
Iimfazwe zeentsana zeYoda Yoda
IRio de Janeiro
bonke Ezi zihluzi zinokusebenza ngokushenxisa umnwe wakho ukusuka esiphelweni sesikrini sasekhohlo (okanye ngasekunene) ngasekunene (okanye ngasekhohlo), kuba oko kubonakala ngezantsi kwiibhaluni ezincinci, ayizizo izihluzi ezizizo, kodwa ziziphumo.
Umahluko phakathi kweefilitha ze-Instagram kunye nezitayile zebali
Ngaphakathi kumabali e-Instagram, emazantsi, uya kuzifumana Iibhaluni ezincinci ezitshintsha ngokupheleleyo umfanekiso owufakayo, nokuba yi-selfie yakho okanye nawuphi na umfanekiso. Uninzi ludidekile lukholelwa ukuba ezo ziifilitha ze-Instagram, xa kungenjalo. Babizwa ngezitayile, kwaye babizwa ngoluhlobo kuba bayakwazi ukuguqula ifoto, nokuba benze ubuso bakho babukeke ngokwahlukileyo, bebeka umnqwazi, bekwenza ukuba ube ngumphambukeli ...
Ngokuchasene noko, amacebo okucoca abhekisa kutshintsho lweefoto, udlala imibala, kodwa ngaphandle kwento enye. Ngamanye amagama, zezona zilula kunye nezona zakudala ozifumanayo xa ufaka ifoto (indlela yakudala) okanye utshintsha ithoni yayo kumabali.
Iifilitha ezintsha ze-Instagram zinokwenziwa
Umbuzo olandelayo onokuzibuza wona ngowokuba unokwenza iifayile zakho ze-Instagram, kwaye impendulo ngu-ewe. Ngapha koko, zombini izitayile kunye neefilitha ezininzi zinoluvo olufanayo nolwakho kwaye uziqalisile ngokubona ukuba indalo yazo ihambe njani kwintsholongwane kwaye izigidi zabasebenzisi ziyile.
Ukwenza oko, Kuya kufuneka ube neenkqubo zokukunceda uzenze.
Ngale ndlela, zininzi izicelo onokuzisebenzisa, kodwa ezo sizicebisayo zezi zilandelayo:
Sisicelo esikunika ithuba lokuba ube neefilitha ezininzi zasimahla (kwaye uhlawulelwe) ukuze uguqule umfanekiso wakho. Phakathi kwabo, unezihluzo zeFX (ezifana nezo ze-Instagram); amacebo okucoca imilingo, uyilo olukhulu ngemifanekiso yakho amacebo okucoca iphepha; Iifilitha zemibala ...
Into elungileyo yile ungazihlela kwaye oko kuyakwenza ukuba ube nefilitha eyenziwe ngokwezifiso ngokwendlela othanda ngayo. Ke kuya kufuneka ulayishe umfanekiso kwi-Instagram yakho.
Sele sikuxelele ngesinye isihlandlo malunga ne-VSCO, nazo zonke izibonelelo ezinazo. Ikhutshwe nge Iifilitha ezimbalwa zasimahla kodwa into elungileyo malunga nale app kukuba unokwenza eyakho. Nje ukuba wenze, ungayigcina kwaye uyisebenzise kweminye imifanekiso.
Ungayisebenzisa zombini kwiPC yakho nakwiselfowuni yakho. Kule yokugqibela uneqela Iifilitha zasimahla onokuzifaka kwiifoto zakho kwaye ugcine iziphumo.
Okanye unokwenza ngokwakho kwaye ugcine useto lwakho ukuze ulisebenzise kamva kwezinye iifoto.
Uzifaka njani iifilitha ozenzayo kwi-Instagram?
Ukuze ukwazi ukupapasha iifilitha ze-Instagram kwinethiwekhi yoluntu, kufuneka ukuba uhlangane neemfuno ezimiselwe zombini i-Facebook kunye ne-Instagram. Ukongeza, kuya kufuneka ubhalise njengomdali kumaqonga omabini ukusukela oko, kungenjalo, ngekhe ube nakho ukufikelela.
Ngapha koko, okwangoku Bangaphezu kwama-20000 XNUMX abadali kwaye bayinxalenye yeqela le-beta evaliweyo. Kodwa ungakhathazeki, ungayifaka ukuba nje udibanisa iakhawunti yakho ye-Instagram kunye neakhawunti yakho ye-Facebook kwaye ulandele amanyathelo akuxelela wona kwiSpark AR Studio.
Nje ukuba wenze, kwaye bayakwamkela, ungalayisha iifayile ze-Instagram:
Kuya kufuneka ulayishe ifayile ethunyelwa kwelinye ilizwe (ukusuka kwi-Spark AR).
Gcwalisa igama lefilitha, umbhali kunye nento eyenzayo.
Faka ividiyo apho ividiyo isetyenziselwa ukujonga "bukhoma".
Ngenisa i icon yecebo lokucoca ulwelo.
Bayakuxabisa indalo yakho kwaye, ukuba bayayibona kakuhle, baya kuyibeka kwaye ungabelana ngayo nabanye abantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I intanethi » Iifilitha ze-Instagram
Guqula igama libe jpg